रक्षामन्त्रीको अवस्था गम्भीर, के भन्छन चिकित्सक ? थप जानकारी सहित — Imandarmedia.com
रक्षामन्त्रीको अवस्था गम्भीर, के भन्छन चिकित्सक ? थप जानकारी सहित
काठमाडौ। एकाएक रक्षामन्त्रीको अवस्था गम्भीर भएपछि अनेक शंका- उपशंका हुन् थालेका छन्। युक्रेनले रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुलाई हृदयाघात भएको दाबी गरेको छ। युक्रेनको गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले शुक्रबार यस्तो दाबी गरेका हुन्।
शोइगु गत मार्च ११ यता सार्वजनिक रुपमा देखिएका छैनन्। यद्यपि मार्च २४ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनी पनि सँगै देखिएका थिए।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा युक्रेनका गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले लेखेका छन्, युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको असफलताबारे पुटिनको आरोपपछि रुसी रक्षामन्त्रीलाई हृदयाघात भएको छ।
उनका अनुसार अहिले शुइगु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। यद्यपि रुसले भने युक्रेनको दाबीबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि रुसी रक्षामन्त्री हराएको उल्लेख गरेका थिए।
जेलेन्स्कीले रुसी सेनामाथि युक्रेनी सेनाले बहादुरीपूर्वक प्रहार गरेको र यसले रुसी सेनालाई ठूलो नोक्सानी भएको उल्लेख गरेका छन्। यता रुसले युक्रेनमाथि आक्रमणको पहिलो चरणको कारबाही सफल भएको दाबी गरेको छ।
रुसी सेनाका जनरल सर्गेई रुड्सकोयले शुक्रबार यस्तो बताएका हुन्। उनले यो आक्रमणमा रुसको सुरुवाती उद्देश्य पनि पूरा भएको उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो समय युक्रेनी सेनाले लड्ने क्षमता पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको उनको भनाइ छ।
उनले रुसले पूर्वी युक्रेनलाई लक्षित गरी आगामी दिनमा सैन्य आक्रमण अघि बढाउने संकेत पनि गरेका छन्। उनले डोनाबासलाई स्वतन्त्र बनाउनु आफूहरुको उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
रुसी सेनाले फेब्रुअरी २४ यता निरन्तर युक्रेनका सहरहरुमा बमबारी गर्दै आएको छ। यद्यपि उसले अहिलेसम्म युक्रेनको कुनै पनि प्रमुख सहरलाई नियन्त्रणमा भने लिन सकेको छैन।
यस्तोमा पछिल्लो केही समययता युक्रेनमा रुसी सेना अघि बढ्न पनि सकेको छैन। पछिल्लो समय युक्रेनी सेनाले रुसी सेनामाथिको आक्रमण पनि सुरु गरेको छ।
त्यसैले पनि रुसले नयाँ योजना चालेको हुन सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्। यस्तोमा रुसले आगामी दिनमा युक्रेनमाथिको आक्रमणको रणनीति परिवर्तन गर्न सक्ने पश्चिमा मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन्।
तेस्तै, रुसले परमाणु युद्ध गर्ने संकेत गरेपछि नेटो एक्सनमा उत्रिएको छ। सैन्य अभ्यासपछि नेटो देशहरूका तेह्र युद्धपोतहरू स्टकहोमतर्फ प्रस्थान गरेको स्वीडेनको अफ्टनब्लाडेट अखबारले उल्लेख गरेको छ।
युद्धपोतहरूमा नौ जर्मन जहाज र बाल्टिकबाट चार जहाज समावेश छन्। ती जहाजहरू अभ्यास पछि फ्रिहम्नेन बन्दरगाहतर्फ लागेको अखबारले आइतबार स्विडेनी सेनालाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।
ती जहाजहरुको यात्रा जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि जनाइएको छ।याता नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले भने नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई आफ्नो समर्थन बढाउँदै गरेको बताएका छन्।
डोनेट्स्क र लुहान्स्क जनवादी गणतन्त्र डीपीआर र एलपीआरले कीभ सेनाहरू विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्न मद्दतको लागि अपील गरेपछि रूसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही शुरु गरेको हो।
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सेनालाई रणनीतिक महत्त्वका परमाणुअस्त्रहरू विशेष सतर्कतासहित तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। क्रेम्लिनमा सुरक्षानिकायका प्रमुखहरूसँग गरेको एउटा बैठकमा उनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसप्रति अमित्रतवत् कार्य गरेको टिप्पणी गरे।
युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धतर्फ इङ्गित गर्दै पुटिनले त्यसलाई गैरकानुनी भनेका थिए।नेटोका शीर्ष अधिकारीहरूले रुसविरुद्ध चर्को टिप्पणी गर्न मान्यता दिएका कारण,
पारमाणविक अस्त्रहरू उच्च सतर्क अवस्थामा राखिने उनले बताए। उनले परमाणुअस्त्र प्रतिरोधात्मक बललाई युद्धका लागि विशेष भूमिकामा सक्रिय अवस्थामा राख्न रुसी रक्षामन्त्री र सेनाप्रमुखलाई आदेश दिएका छन्।
आफ्नो पारमाणविक बललाई विशेष सतर्क अवस्थामाूमा राखिएको रुसको घोषणा पश्चिमा देशहरूले रुसविरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धप्रति राष्ट्रपति पुटिनको आक्रोश र नेटोबाट रुसलाई खतरा रहेको भन्ने उनको डरका कारण सिर्जित अवस्थाको सङ्केत हो।